नेपाल आज | प्रधानमन्त्रीको छेउबाट भीम रावललाई ज्यान मार्ने धम्की दिने को?
प्रधानमन्त्रीको छेउबाट भीम रावललाई ज्यान मार्ने धम्की दिने को?
काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज भीम रावलले आफूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको दाबी गरेका छन् ।
नेता रावलले आफ्नो ज्यान मार्ने धम्की बालुवाटारमा बस्ने व्यक्तिबाट आएको दाबी गरे । तर उनले कसले धम्की दियो भन्ने खुलाएनन्र ।
‘मलाई ज्यानको समेत धम्की दिइएको छ बालुवाटार बस्ने व्यक्तिबाट’ नेता रावलले भने,‘लेडि डायनाले जसरी ज्यान गुमाउनु प-यो तिमीले पनि त्यसरी नै ज्यान गुमाउनु पर्ला भनेर मलाई धम्की दिइयो । यो विडम्बना हो । ’
नेता रावलले कसैको मृत्यु वा हत्याले त्यस व्यक्तिको राष्ट्र राष्ट्रियताका पक्षमा निस्किएका आवाजहरु हराएर नजाने बताए । यस्ता धम्कीबाट आफू नडराउने भन्दै नेता रावलले भने,‘म त्यसबाट डराउँदिन । र म स्मरण गराउन चाहन्छु कोही व्यक्ति पनि यो धर्तीमा अजर अमर छैनन् भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिले हेक्का राख्नुपर्छ ।’
राजनीतिक दलका नेताहरु जनताका माध्यम भएको बताउँदै नेता रावलले देशको माया गर्ने र राष्ट्रलाई जोगाउनु पर्छ भन्दा साथ र समर्थन भन्दा धम्की र विरोध हुन दुःखद् भएको बताए । देशको हीत, राष्ट्रियता, स्वाधिनताको कुरार्मा नझुकौं नलत्रिऔं, हामी उभिएर देशको स्वाथ्र्यको कुरा गरौं भन्दा केहीलाई चिन्ता लागेको रावलको भनाइ थियो ।
यता बालुवाटारले नेता रावलकाे दाबीकाे खण्डन गरेको छ । आफ्नै दलको सरकार र पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ज्यान मार्ने धम्की आएको गम्भीर आरोपमा कुनै सत्यता नभएकाे भन्दै बालुवाटारले खण्डन गरेकाे हाे।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नेता भीम रावलले चर्चामा आउनका लागि झूठ बोलेको आरोप लगाए । सल्लाहकार थापाले भने नेता रावलले लगाएको आरोपको खण्डन गरे ।